प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक संजालमा तिब्र आलोचना « Postpati – News For All
प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक संजालमा तिब्र आलोचना
भदौ २८, काठमाडौं । देशभर भैरहेका महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना बिषयलाई संकेत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला हिंसाका घटना सरकारविरुद्धकै षड्यन्त्रको रुपमा देखिएको टिप्पणी दिएका छन ।
उक्त टिप्पणी पछि पार्टी अध्यक्षले नै यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा चर्को आलोचना बढेको छ । बलात्कारका जघन्य अपराध जस्ता बिषयलाई एक जिम्मेवार ब्यक्तिले नै राजनितिकरण गरेर पिडक प्रती उदासिनता देखाएको गम्भिर आरोप समेत लगाउन थालेका छन ।
उनको यस्तो टिप्पणी प्रती कटाक्ष गर्दै एक सामाजिक संजालकर्ताले यस्तो गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिले देशकै बालात्कार गरेको बताएका छन। उनले भनेका छन ‘एउटा जिम्मेवारी दलको नेता भएर अपराधलाई राजनीति सँग जोडेर अभिव्यक्ति दिनु देशकै बलात्कार गर्नु सरह हो ।’
के भनेका थिए प्रचन्डले ?
‘एकातिर सरकार दुई तिहाइ बहुमतको छ । सरकार कम्युनिस्टको नेतृत्व छ तर अर्कोतिर समाजमा दिनदिनै विचलन देखिन्छ । विकृतिहरु अझ बढेका हुन् कि भन्या झैँ गरी देखिन्छ ।’ भन्दै नियोजित ढंगले सरकारलाई असफल पार्न बलात्कारका घटनाहरु घट्ने गरेको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
महिला हिंसा, भष्टाचार र कालोबजारीका घटना नियोजित रुपमा नै आइरहेको भन्दै प्रचण्डले यस्ता घटना सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रकै रुपमा आउन खोजेको उनले बताए । ‘चाहे महिला हिंसाका घटना हुन्, या भ्रष्टाचारका घटनाहरु, कालोबजारियाहरु । तिनीहरु नियोजित रुपले नै अगाडि आउन खोजेका हुन् कि ? सरकारका विरुद्ध षडयन्त्रका रुपमा आउन खोज्या हुन कि भन्या जस्तो गरी देखिन्छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे ‘समाज नै विस्तारै निराशा र अराजकतातिर जान खोजेको त होइन कतै ?